Taliyaha ciidanka Soomaaliya oo sheegay in ay xireen askar isku dayay in ay qalab ciidan kala baxaan xeradii uu Imaaraatka maamuli jiray - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaTaliyaha ciidanka Soomaaliya oo sheegay in ay xireen askar isku dayay in ay qalab ciidan kala baxaan xeradii uu Imaaraatka maamuli jiray
Muqdisho-(Puntland Mirror) Askar isku dayay in ay saanad iyo qalab ciidan kala baxaan xerada Gordan ee Muqdisho ayaa la xirxiray, sida uu sheegay taliyaha ciidanka.
Taliyaha ciidanka xooga dalka Soomaaliya Janaraal Cabdiweli Jaamac Gorod ayaa warbaahinta u sheegay in ay gacanta ku dhigeen askar ku jirtay xerada Gordano oo isku dayay in ay si sharci daro ah kula baxaan saanad iyo qalab ciidan.
“Ciidanka xoogga dalka waxay hadda gacanta ku hayaan askartii iyo saraakiishii ka danbeeyey dhacdadaan, inkastoo ay tiro ahaan aad u yar yihiin haddana waa mid aan marnaba la qaadan karin, waxaana ballanqaadeeynaa in aan hor keeni doonno sharciga.” Ayuu yiri Janaraal Gorod.
Maanta oo Isniin ah ayaa rasaas laga maqlay xerada ciidamada Gorad ee Muqdisho.
Sabtidii, dowladda federaalka Soomaaliya ayaa la wareegtay ciidankii ay tababareen Imaaraatka Carabta oo ku jiray xerada Gorad.
March 28, 2018 Soomaaliya oo Golaha Ammaanka Qaramada Midoobay ka codsatay in ay qaadaan tilaabo ka dhan ah saldhiga milatari ee Imaraatka ka dhisayo Berbera